KALSOONIDDA FACETIME EE PC WINDOW 7, 8 & CADAADO 10 🤑
Hello Facetime jeclaa! Ma waxaad tahay qof wareersan oo ku saabsan sida aad ku rakiban kartaa facetime ee pc Window sida Fududeynta Windows 7, Fududeynta Windows 8, ama Xitaa haddii aad rabto in aad soo dejisan iyo rakibi facetime ee suuqa kala 10 nidaamka qalliinka ka dibna raac qodobkan?
aad facetime kartaa on computer ah
Halkan qodobkan, Waxaan ku siiyey qaar ka mid ah talooyin fudud iyo tabaha oo u ogolaan doonaa in aad isticmaasho facetime app jecel inay shuqullo on madal uu furmo suuqa.
Haddii aad isticmaalayso laptop uu furmo suuqa oo aad rabto inaad download facetime daaqado 7 laptop ka dibna wax kasta oo kasta oo daboolay this article kaliya raacaan habka fudud oo la hoos ku siin.
Facetime by Apple Inc. waa mid ka mid ah ugu interactive, waxtar leh, iyo software ugu dambeysa ee videotelephony ee saameeyay adduunka oo dhan. Ayado this digital, qof kasta oo doonayo inuu sii joogo bulsho ku xiran kuwa kale.
Iyada oo taageero ka waqti Face, aad xiiso samayn karaa labada video iyo maqal ah oo ku baaqay in la sii falgal la hareeraha. Iyada oo dhererka waqtiga, isticmaalka app FaceTime si wayn ayay kor u kacay ka mid ah Apple qalabka isticmaala.
App Tani waa tartan dadka kale sidii ay u saamaxdo ka qabashada tayo-sare ee video iyo maqal ah oo ku baaqay in ugu. Sida laga soo xigtay cilmi, inta badan dadka haysta qalabka Apple oo ay ku jiraan iPad, iPhone, Mac, iyo iPod isticmaalayso FaceTime inuu sii joogo la xiriiri ay dunida gaarka ah iyo shirkadaha.
Markii hore, Face Time ayaa waxaa si gaar ah loogu talagalay qalabka Apple. Laakiin sabab u tahay qaab hufan iyo baahida, hadda waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa FaceTime for PC. Ma aha in xiiso leh? hab isgaadhsiin ayaa gebi ahaanba hadda bedelay.
Dadka door bidaan in ay sameeyaan video iyo maqal ah oo dheeraad ah oo ku baaqay in halkii e-mails ama mails. Iyada oo taageero ka app this smart of Fact Time, waxaad si fudud u kala hadli kartaa ama aad aragto qof fadhiya meel kasta oo dunida dacaladeeda.
Wadamada qaarkood sida Maraykanka iyo UK, dadka intooda badan waxa ay isticmaalaan aaladaha Apple taas oo ka dhigaysa in ay faa'iido si ay u sii lala kale qalabka isticmaala Apple.
Laakiin dalalka qaar ka mid ah, macaamiisha door bidaan in ay isticmaalaan PC for waxqabadka digital ay maalin kasta. Sidaas in la keeno istareexsan dadka isticmaala sida, article this hanuuniyo sidii ay u si fiican u isticmaalaan app macruufka ah oo ku saabsan kombiyuutarada shakhsi. Tani waxay aad u saamaxaaya in ay xirmaan dad kale oo la isticmaalayo qalab kala duwan Apple.
Sidaas darteed waa inaad reading this article haddii aad rabto in aad kala soo bixi, rakibi oo ay maamulaan app ku sugun tahay of Fact Time on your Computers Personal.
1 Download iyo rakib Facetime App Waayo, PC:
2 Sida loo Download iyo rakib FaceTime for PC?
2.2 Features of FaceTime App aad PC:
Download iyo rakib Facetime App Waayo, PC:
Sida caadiga ah, Apple ayaa app ah in-la dhisay ee FaceTime on dhammaan qalabka ay ku jiraan iPhone, iPod, iPads, iyo Mac. Laakiin ma waxaad ka heli kartaa Doorashadan on your PC. Ujeedada this, aad leedahay si loo soo dajiyo Face Time adigoo isticmaalaya emulator ah. habka dajinta Tani duuban tahay talaabooyinka soo socda:
marka hore, waa in aad ka soo dejisan ee iPadain emulator. Waxaad ku yeelan kartaa adigoo isticmaalaya link la siiyey: ipadian.net
Ka dib markii degsado emulator iPadian ah, furan ay faylka iyo rakibi sidii shuruudaha iyo tilmaamaha la siiyey.
Markaasuu, marka emulator iPadian la geliyo, aad hadda in la furi karo oo gasho by bixinta macluumaadka loo baahan yahay. Talaabadani waxay u baahan tahay in aad Apple ID iyo password.
Hadda waxaad dooran kartaa in aad app FaceTime. Laakiin haddii ay dhacdo in aadan ka dibna waxaa ka heli kartaa in aad si fudud u soo dejisan kartaa iyadoo la kaashanayo barnaamijka Apple App Store.
Ugu dambayn, galaan xiriir mid ka mid ah dunida Apple oo isticmaalaya ay email, id user ama tirada iyo bilaabaan samaynta audio ama video calls. Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya video ama icon telephonic siiyey in app.
Sida loo Download iyo rakib FaceTime for PC?
Ikhtiyaar kale si ay u isticmaalaan facetime aad PC socda xoogaa tallaabooyin fudud waa sida soo socota:
Facetime on PC waxaa suurtagal ah ka dib markii degsado Bluestacks on your PC.
Ka dib markii degsado Bluestacks, waxaa rakib oo mar download dhammeystirayaa, qeybtii labaad aad PC.
Tag menu iyo riix codsiga dukaanka play.
Ka dib markii ay furan yihiin Store Play, Riix goobidda iyo nooca Waqti ka dibna Download facetime daaqado pc.
Si aad u rakibi Facetime isla markiiba, riix Open ama Run, ka dibna raac tilmaamaha on your screen. *Haddii aad baxdo password maamulka ama xaqiijinta, ku qor password ama siiyaan xaqiijinta.
Si aad u rakibi FaceTime dambe, riix Save, ka dibna soo bixi file rakibo si aad computer. Marka aad diyaar u ah inay rakibi FaceTime u tahay, double-riix faylka, ka dibna raac tilmaamaha on your screen. *Tani waa doorasho nabdoon sababta oo ah iskaan kartaa file rakibo for fayrusyada ka hor inta aadan sii wadi.
Sida loo isticmaalo Face Time on PC?
Ka dib markii ay ku rakibidda app aad jeceshahay ee Face Time on your PC, waa inaad raacdaa tallaabooyinka aasaasiga ah si ay u bilaabaan isticmaalkiisa:
Features of FaceTime App aad PC:
Tani app videotelephony cajiib leedahay faa'iidooyin badan oo ay bixisaa natiijooyin aad u fiican si ay macaamiisheeda. Qaar ka mid ah qaababka ay xiiso yihiin:
High-Tayada Video Call
App Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay yeedhayso video. Fikradda asaasiga ahi waa in ay sameeyaan dadka ku xirmaan oo wuxuu ka dhigi dhow iyadoo la kaashanayo of codsiyada video.
software Tan waxaa si taxadar leh loo qorsheeyay si aad ku raaxaysan karaan qaraarkii oo tayo sare leh oo ku baaqay in video. Warka wanaagsani waa Face Time waxaa hadda taageeraya 1080p on Computers Personal.
Si taas loo raaxaysan, nidaamka waa in ay leedahay kamarado in-la dhisay. Oo ay dhacdo in aadan haysan camera ah ka dibna aad ka iibsan kartaa webcam a.
Time Face ayaa sidoo kale waxay bixisaa widescreen 16:9 dhinacyo. Tani waxay bixisaa waayo-aragnimo ah isugu yeedhayso fiican marka aad rabtid in aad ku xirmaan kuwa kale ee isticmaala.
Sababtoo ah halka ay tayada iyo waxtarka, app this waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fiican marka loo eego tartanka ay ku jiraan Rasuul, Skype, Google Duo iyo qaar badan oo.
call audio Good:
Waxa intaa dheer in la feature gaar ah video call, waxa kale oo aad isticmaali kartaa fursadaha call audio. Waxa kale oo uu leeyahay tayada codka aad u wanaagsan eegin fogaanshaha
Tani waxay kaa caawinaysaa in aad si uu u eego si fiican u soo bandhigeen sawir yar oo dhinaca inta aad mashquul u yeedhataana yihiin.
user- interface Friendly
Faa'iidada kale ee tartan rasmi ah ee FaceTime aad PC waa, waxa ay leedahay interface ah user-saaxiibtinimo naalloon. Waa sidaas fudud, siman, oo si fudud. Qof kasta isticmaali kartaa oo aad si haboon u fahmaan. Tani waa sababta in dadka isticmaala inta badan gebi ahaanba yihiin in jacayl la app FaceTime ah by Apple.
Si aad u gaarka ah iyo ammaanka, aad xannibi karaa xiriir kasta oo. Haddii qof waxaa gardaraysi ama aad diiqayaa, aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa in la xiri qofka in uu magaca galaya in block-liiska
Waxaa intaas dheer in this, Face Time sidoo kale bixisaa muuqaalada kale soo jiidasho leh
• Waxaad si fudud u gaadhi karto in xiriir aad u jeclaystay by kaliya isticmaalaya ID ama phone number Apple.
• Waxaad ku raaxaysan karaan call group dhex FaceTime. Waxa xiiso leh, app this aad u saamaxaaya in ay xirmaan ilaa 32 users wada
• Si aad u leeyihiin xiiso leh iyo hadalka interactive, waxaad isticmaali kartaa stickers iyo Animoji
• Inta lagu guda jiro calls video, waxaad isticmaali kartaa kamaradaha aad laba siyaabood
Waxaad ku tusin karaan wejigaaga adigoo isticmaalaya camera a hore ee PC ama
Waxaad isticmaali kartaa dib u camera in aad saaxiibo u aragto waxa aad daawashada
• Si aad ula xiriiri lahayd kuwa aad jeceshahay si deg deg ah, waxaad samayn kartaa liiska Favorites.
• Waxaad ku raaxaysan karaan Face Time midkood WI-Fi ama xiriir xogta aad
• Waxaad isticmaali kartaa app oo ku qoran luqado kala duwan oo ku xiran doorbidkaaga
Waxaan rajaynayaa in maqaalka oofiyey oo dhan faahfaahin aad u baahan tahay in ay isticmaalaan facetime aad PC. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, ha ku sheeg sanduuqa comment. Waan ka jawaabi doonaa su'aashaada waxaanan xallin doonaa weydiimahaaga.